हिमानी – ताजा समाचार
१) धन नष्ट हुन्छ, सौन्दर्य विलीन हुन्छ, जीवन तेजसँग समाप्त हुन्छ,शक्ति लुप्त हुन्छ तर देश लागि तिमीले गरेको योगदान अजर र अमर रहनेछ । त्यसैले म वा मेरो होइन हामी नेपाली भनौ , नेपाली बनौँ सम्हालौँ नेपाल मुल्याकंन एक दिन अवश्य हुनेछ । २) आत्मगान होइन राष्ट्रगान गर्न पाउ, राष्ट्रकै लागि बाच्न र बलिदान दिन […]
काठमाडौं। पुर्व पुवराज्ञी हिमानी शाहले धेरै उतारचढावहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ । भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहकी छोरी हिमानी अहिले समाजिक सेवामा सक्रिय छिन् । जनतासँग निकैनै सुमधुर र स्वच्छ छवि बनाएकि हिमानीले आफ्नो पतिका कारण थुप्रै समस्या भोग्नुपर्यो । राजपरिवारको बुहारी र भाविष्यकि रानीको रुपमा हेरिएकि हिमानी […]
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले गरिन् रक्तदान…
बेलाबखतमा सामाजिक कार्यमा एकदमै सक्रिय रहँदै आएको हिमानी कोष तथा लायन्स क्लव अफ काठमाडौँले शनिबार काठमाडौँको तीनकुनेमा रक्तदान तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। तीनकुनेको सिद्धेश्वर माविमा भएको उक्त कार्यक्रममा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसँगै विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो भने रक्तदान समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह, उनका छोरा हृदयन्द्र शाह, पूर्व […]
हिमानी शाह लेख्छिन् – रुदैनन् कहिले जल्नेहरु !! रुन्छन् त केवल जलाउनेहरु !!
ताजा समाचार । पूर्व युवराज पारस शाह र सोनिका रोकायाबीचको सम्वन्ध मिडियामा आएपछि पुर्व युवराज्ञी हिमानी शाह लगातार फेसबुकमा स्टाटस लेख्न थालेकी छिन् । आजमा मात्रै उनले २ वटा स्टाटस लेखेकी छिन् । पुर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले फेरी अर्को भावुक स्टाटस लेखिकीछन् । आफ्नो फेसबुकमा उनले मृ त्युसंग जोडेर अर्को स्टाटस लेखेकी हुन । जाऊ […]
काठमाडौं । पूर्व राजकुमार पारस शाह र हिमानी शाहको कोखबाट दुई छोरी र एक छोरा छन् । ति मध्य पूर्णिका जो सामाजिक कामहरुका सहभागि हुने गर्छिन । लामो समय देखि पूर्व अधिराजकुमार पूर्णिका शाह आमा हिमानीसँगै परोपकारी कार्य र समाजसेवामा सक्रिय छिन् । अर्को तर्फ उनी पढाई, साहित्य र कलामा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । […]
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको आज जन्मदिन, ४४ वर्षमा पनि सुन्दरता उस्तै
काठमाडौं । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको आज जन्मदिन । १९७६ अक्टोबर १ तारिखका दिन उनको जन्म भारतको राजस्थान सिकरमा भएको थियो । यस आधारमा आज उनी आफ्नो ४४ औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् । हिमानी सिकरका १२औं राजा विक्रम सिंहकी माइली छोरी हुन् । उनकी आमा विपुला सिंह बझाङकी हुन् । हिमानीको सन् २००० मा पूर्वयुवराज पारससँग बिहे […]
ओलीको स्वास्थ्य, माधब प्रधानमन्त्री, ह्दयन्द्र राजा, रवि लामिछाने…जन्मदिनमा माताको भविष्यवाणी
देश, परदेश र व्यक्ति अधिकांशको भविष्यवाणी मिलाउने सबिता सरु शर्मा आचार्यको आज जन्मदिन । उहाँलाई हाम्रोपनि जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना । उहाँ २०४५ साल भदौ १८ मा धनकुटामा जन्मिनु भएको हो । उहालाई ७ वर्ष को उमेर देखि नै अलौकिक शक्तिको ज्ञात भएको हो । माताका वाणीहरु, मानिसले घमण्ड र रिस गर्न छाडौ ऑफै ऊन्नति […]